Labada ujeedo ee Masar kala leedahay Soomaaliya oo la cadeeyay! | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Faalooyinka Labada ujeedo ee Masar kala leedahay Soomaaliya oo la cadeeyay!
Labada ujeedo ee Masar kala leedahay Soomaaliya oo la cadeeyay!
6-december, wafdi sare oo dublamaasiyadeed oo Masaari ah oo uu hogaaminayo Kaaliyaha Wasiirka Arimaha Dibada Masar ee Arimaha Afrika Sherif Issa ayaa booqasho ku yimid magaalada Muqdisho xilli Masar ay qaaday tillaabooyin ay ku xoojinayso joogitaankeeda Afrika.
Wafdiga Masar waxay booqashadooda kubilaabeen kulan ay laqaateen Wasiirka Arimaha Dibada Soomaaliya Maxamed C / risaaq si ay ugala hadlaan “horumarka kajira Soomaaliya, xaalada gobolka ee wadamada deriska ah iyo saameynta ay kuyeelan karto xasiloonida iyo amaanka geeska Afrika, iyo waliba qaababka lagu hormarin karo xiriirka laba geesoodka ah. laba dal. ”Ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Masar.
Cabdirisaaq ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray “Waxaan ka wada hadalnay xiriirka labada dal. [Soomaaliya] iyo [Masar] waxay wadaagaan saaxiibtinimo iyo xiriir walaaltinimo oo adag. Waxaan rabnaa inaan sii xoojino xiriirkeena. ”
Dec. 7, waftigii Masar waxa ay ka qayb galeen furitaankii Madasha Iskaashiga Soomaaliya iyo beesha caalamka.
Rokha Hassan, oo xubin ka ah Golaha Arimaha Dibadda ee Masar, ayaa u sheegtay Al-Monitor in booqashada ay ka tarjumeyso rabitaanka Masar ee ah in ay sare u qaado xiriirka ay la leedahay Soomaaliya, maadaama labada dal ay wadaagaan xiriir wanaagsan oo taariikhi soo jireen ah ka hor xornimadii Soomaaliya ee 1960.
“Laakiin markii dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya uu sii kululaaday bilowgii 1990-meeyadii iyo xasillooni-darradii halkaas ka jirtay, xiriirkii labada dal wuxuu ahaa mid ismari waa ku yimid, waxaana la weeraray safaaradda Masar, oo ay weheliso safaarado kale oo ajnabi ah xilligaas. . Xarunta ugu weyn ee safiirka Masar waxaa loo raray magaalada Nairobi ee dalka Kenya si amaankeeda loo sugo. Xiriirkooduna wuu is bedbedalayay tan iyo markaas, ”ayuu yiri Xasan.
Xasan waxa uu carabka ku adkeeyay in Masar ay hada taageerto midnimada Soomaaliya ayna dooneyso in ay ku gaarto xasilooni, horumar iyo dib u dhis.
Waxaa intaa dheer, bishii Maarso, Muqdisho ma aysan taageerin Qaahira markii ay diiday qaraar qabyo ah oo ay soo bandhigtay Jaamacadda Carabta oo lagu cambaareynayo talaabooyin keli keli ah oo ay Itoobiya ka qaadaysay biyo xireenka Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD).
Mukhtar Ghobashy, oo ah ku xigeenka madaxa Xarunta Carabiga ee Daraasaadka Siyaasadeed, ayaa booqashada wefdiga diblomaasiyadeed la xiriiriyay tallaabo ay Masar u qaadday Afrika ee uu ka talinayey Madaxweyne Abdel Fattah al-Sisi. Wuxuu u sheegay Al-Monitor in booqashada ay ka tarjumeyso isku dayga Masar ee ah in ay door weyn ka ciyaaraan Soomaaliya iyadoo ujeedadu tahay abaabulida taageero farsamo oo ku saabsan arinta GERD oo dhinac ah iyo in laga hortago qulqulka Turkiga ee geeska Afrika.
Ghobashy ayaa yiri, “Ficilkii Masaarida ee Afrika wuxuu inta badan diiradda saarayaa arrinta GERD. Haddana Masar waxay ka walaacsan tahay arrin kale oo ka taagan Soomaaliya, taas oo ah soo gelitaanka ballaaran ee cabsida leh ee Turkigu ku hayo dhulkeeda. ”
Saddex maalmood kahor booqashada wefdiga Masar, C / risaaq wuxuu la kulmay 3-dii Diseembar safiirka Turkiga u fadhiya Muqdisho, Muhammad Yilmaz. C / risaaq wuxuu yiri, “Turkiga si isdaba joog ah ayuu noo garab istaagay. Turkiga wuxuu na siiyaa kaalmo militari, mid horumarineed wuxuuna si deg deg ah nooga soo jawaabey COVID19.
Xasan sii hadlaya ayaa yiri, “Nasiib darro, sannadihii la soo dhaafay, dalal ay ka mid yihiin Turkiga waxa ay awood u yeesheen in ay ku soo dhex-dhuuntaan Soomaaliya iyagoo gargaar bixinaya, illaa ay ka guuleysteen in ay xarun milatari ka dhigtaan (saldhig) magaalada Muqdisho sanadkii 2017. Sidaa darteed, Masar waxa ay ahayd in ay xoojiso xiriirkeeda. Soomaaliya waa in ay ku dhaqaaqdo dheelitirka loo baahan yahay. ”
Ghobashy waxa uu sheegay in waftiga Masar laga yaabo in ay ka wada hadleen intii ay booqashada ku joogeen Soomaaliya sidii saldhiga Milateri ee Masar looga sameyn lahaa Muqdisho. Wuxuu sharraxay in Soomaaliya ay wajaheyso caqabad weyn markii ay soo ifbaxayaan Al-Shabaab oo gacan saar la leh Al-Qaacida. Malaha Masar waxa ay ku bixineysaa khibradeeda ku wajahan ururada xagjirka ah, ayuu yiri.
Dhanka kale, ciidamada qalabka sida ee Masar waxa ay soo dhoweeyeen 6dii Dec. wafdi ka socda kooxda kubada cagta ee Horseed, oo ay leeyihiin ciidamada Soomaaliya, kana qeyb qaadanayey Koobka Confederation Cup. Ciidanku wuxuu siiyay kooxdii Soomaaliyeed goobo tababar iyo adeegyo caafimaad intii ay joogeen Masar sida uu qoray wargayska Monitor.
Cumar Maxmuud, oo ka tirsan kooxda xasaradaha Caalamiga, ayaa sheegay in booqashada wafdiga Masar ay timid xilli xasaasi u ah Soomaaliya, maaddaama doorashada madaxweynaha iyo baarlamaanka ay dhowdahay, saaxiibo badan oo caalami ahna ay booqanayaan si ay u qiimeeyaan xaaladda.
Maxamuud ayaa u sheegay A-Monitor, “Ma hubo illaa iyo inta uu xiriirka Masar iyo Soomaaliya uu is beddelay xilligii Sisi.” Sidaas oo ay tahay, Maxamuud wuxuu carabka ku adkeeyay in Masar ay dooneyso in ay sii wado xiriirkeeda ay la leedahay Soomaaliya si ay ugu istaagto in ay cag dhigato Geeska Afrika marka laga hadlayo dagaalka sii socda ee ay kula jirto Itoobiya ee ku saabsan arrimaha GERD.
Masar, Itoobiya iyo Suudaan waxa ay wadaxaajood uga jiraan muranka GERD muddo toban sano ah, ujeedkuna waxa uu yahay in heshiis laga gaaro hawlgalka iyo buuxinta biyo-xidheenka, oo ay Masar u aragto khatar jirta oo xagga amniga biyaha ah.
Maxmuud ayaa yiri, “Dhibaatada GERD waxa ay Soomaaliya gelisay xaalad adag sababo la xiriira xiriirka ay la leedahay Itoobiya iyo Masar, Soomaaliyana waxa ay isku dayday in ay mar uun isu muujiso dhexdhexaadiye. Si kastaba ha noqotee, uma muuqato in labada dhinac midkoodna arintan si dhab ah u qaatay.
Maxamuud wuxuu ku soo gabagabeeyey, “Abuuritaanka xiriirka Soomaaliya iyadoo loo eegayo loolanka ballaaran waa istiraatiijiyad halaag u ah dhinacyada oo dhan. Soomaaliya ma ahan in ay noqoto garoon lagu tartamo kooxaha ka soo horjeeda. ”
Previous articleKenya Maxay ka tiri go’aankii xukumada Soomaaliya ku jartay xiriirkii kala dhexeeyay?
Next articleCiidamada dowladda oo hareereeyay xaafado ay degan yihiin Musharaxiinta